Ngoku singayigcina i-Oukitel K9 | I-Androidsis
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, besithetha ngayo I-Oukitel K9, isiphelo sendlela esinokugcina iiyure ezimbalwa kwiwebhusayithi yomenzi okanye ngeAliExpress. Esi siginali sisinika enkulu ye-7,12 intshi yesikriniLe yeyona nto inomtsalane kuyo ukongeza kwi-6.000 mAh ibhetri.
Kodwa kuba awuhlali nje kwiscreen ukuya kwibhetri encanyathiselwe, nokuba zimbini ezona mpawu ziphambili, Okulandelayo siza kukubonisa yonke inkcazo yale ndawo intsha, isiphelo sendlela esiza kukwazi ukonwabela iividiyo esizithandayo naphina ngaphandle kokukhathazeka ngebhetri.
1 Iscreen kwinto esiyifunayo
2 Ukusebenza kunye noyilo
3 Ikhamera yenziwe nguSony
4 Uyithenga phi i-Oukitel K9
Iscreen kwinto esiyifunayo
I-Oukitel K9 isinika isikrini se-7,12-intshi, isikrini esine-FullHD + isisombululo (1080 × 2244) kunye nenotshi encinci kwinxalenye ephezulu yesikrini ngohlobo lwamanzi kwaye loo nto ayinakuchaphazela ukubonwa komxholo obonisiweyo.
Ukusebenza kunye noyilo
Ngaphakathi kwe-Oukitel K9 siyifumana eyona processor inamandla evela kumenzi weprosesa iMediaTek, IHelio P35, iprosesa esinika amandla amaninzi kwimisebenzi yemihla ngemihla kunye nokonwabela eyona midlalo inamandla kwintengiso. IMediaTek Helio P35 yenziwa kusetyenziswa inkqubo ye-nanometer eyi-12 ngesantya sokulungisa ukuya kuthi ga kwi-2.3 GHz, ngelixa i-GPU ihamba nge-680 MHz.I-Oukitel K9 ihamba kunye ne-4 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina ngaphakathi.
I-6.000 mAh ibhetri ixhasa ukutshaja ngokukhawuleza kwaye kwiyure nje enesiqingatha, sinokutshaja ngokupheleleyo ibhetri. Uyilo lwangasemva lwamkela ukubonwa okucwebezelayo kuzo zombini iijethi emnyama kunye nohlobo oluqaqambileyo oluhlaza okwesibhakabhaka, kuxhomekeke kwindlela ukukhanya okukhombisa ngayo.
Ikhamera yenziwe nguSony
Una vez más, abafana base-Oukitel bathembele ku-Sony yecandelo lokufota, ngokukodwa kwimodeli ye-IMX298 yekhamera ephambili, inzwa ye-16 mpx ekhatshwa ngumncedisi we-2 mpx, ukwenza iziphumo ezinzulu emfanekisweni kwaye ukwazi ukuphazamisa imvelaphi. Ngaphambili, sifumana ikhamera ye-8 mpx.
Uyithenga phi i-Oukitel K9
Njengoko benditshilo ngasentla, i-Oukitel K9 ngoku iyafumaneka ukuze igcinwe. Ukuba sisebenzisa eli thuba lokuthengisa kwangaphambili, phakathi kuka-Meyi 13 no-20, siya kuba nakho fumana le modeli nge $ 199,99 kuphela ukugqitha AliExpress okanye ngokusebenzisa IbangoodIxabiso layo lokugqibela xa lisungulwa ngokusemthethweni kwintengiso iyakuba ziidola ezingama-249,99.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Oukitel » Ngoku sinokugcina i-Oukitel K9
Bukela kwaye uzame kwi-psychedelic yesiqhelo ebizwa ngokuba yiXOB
Dlala imidlalo ngoku ipholile ngokwenene kuba iye yaba liziko lolawulo kwimidlalo ye-Android